ဧပြီလမွေးနေ့ရှင် သားသား၊မီးမီးတို့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် အစီအစဉ် • Zifam Myanmar
+95 1 966 9344
Home » ဧပြီလမွေးနေ့ရှင် သားသား၊မီးမီးတို့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် အစီအစဉ်
ဧပြီလမွေးနေ့ရှင် သားသား၊မီးမီးတို့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် အစီအစဉ်
ဧပြီလအတွင်းမွေးဖွားတဲ့ Smart Kids Fan သားသားမီးမီးလေး တို့အတွက် လက်ဆောင်များပေးသွားမယ့် အစီအစဉ်လေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင် ဖေဖေ၊မေမေတို့က အခုအချိန်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ရောဂါအန္တရာယ်မှ သားသား၊မီးမီးလေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ အတွက် ဘယ်လိုဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှုတွေ ပြုလုပ်ပေးနေတယ် ဆိုတာ ကို သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်လည်မျှဝေတဲ့အနေနဲ့ ပြောပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(ပုံမှန်အချိန်များမှာဆိုရင် မွေးနေ့ရှင်သားသား၊မီးမီးလေးတို့အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးတဲ့အစီအစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်မှာ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် ဧပြီလမွေးနေ့ရှင် လေးများအတွက် အစီအစဉ်လေးကို အခုလိုစီစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်)
ဒီအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ကြမယ့် Smart Kids Fan တွေအတွက် လိုက်နာရမယ့်အချက်လေးတွေက –
(၁) ဧပြီလအတွင်းမွေးဖွားတဲ့ သားသား၊မီးမီးလေးတွေဖြစ်ရပါမယ်။
(၂) သားသား၊မီးမီးလေးတွေရဲ့ အမည်၊ မွေးနေ့၊ ဓါတ်ပုံနှင့်အတူ နေတဲ့မြို့ပါဝင်ရပါမယ်။
(၃) ဖေဖေ၊မေမေတို့က သားသား၊မီးမီးလေးတွေကို အခုအချိန်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ရောဂါအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှုတွေ ပြုလုပ်ပေးနေတယ် ဆိုတာကို သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်လည်မျှဝေတဲ့အနေနဲ့ပြောပြပေးရမယ်။
ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့သားသား၊မီးမီးလေးတွေထဲက (၅) ဦးကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ကာ Vita-Kid နှင့်Mega3Chewable ကလေးအားဆေး များကို လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဆောင်ရရှိသွားကြတဲ့သားသားမီးမီးတို့ကို ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပါက Smart Kids ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ဧပြီလမှာမွေးဖွားတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေအားလုံး Smart Kid လေးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်။
(ဒီအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ချင်သူများအတွက် Smart Kids Facebook Page မှာဝင်ရောက်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။)
Smart Kids Facebook Page
Mega3Chewable
No. 95/B, 95 Residence ,Kyaik Waing Pagoda Road, 8th Mile, Mayangone Township,Yangon
+959261772689/ 01 9669344 - 48
© Copyright 2018. Zifam Myanmar. All Rights Reserved.